Soosaarayaasha & Shirkadaha Xawaaraha Sare - Shiinaha Warshad Xawaare Sare
DAYA dhinac toosan labalaab feeraha riix riix VS Dhinaca kale toosan labajibaare crank press Daya press Daya press: oo leh madal iyo xayndaabka badbaadada, oo ku haboon dayactirka xajinta iyo isbedelka saliida qaboojinta, suunka gawaarida ugu weyn waa dabacsan yahay oo sahlan in la qabsado, oo ku habboon dayactirka xiga. . Ammaan badan oo ku habboon. Saxaafad kale saxaafad kale: Iyadoo aan lahayn dayactir madal. Dayactirka xajinta, bedelka saliida qaboojinta, hagaajinta dabacsan ee suunka gawaarida, iwm.
Sifooyinka waxqabadka 1. Qaabku wuxuu ka samaysan yahay bir xoog badan oo bir ah. Ka dib gargaarka culeyska gudaha, maaddada waa xasilloon tahay saxsanaantuna wali isma beddelin, taas oo ugu habboon ku-soo-saarka shaabad joogto ah; 2. Wadada tareenka laba-geesoodka ah, qaab dhismeedka tiirarka udub-dhexaadka ah, iyadoo la adeegsanayo eber qalad dhalid si loo beddelo qaab-dhismeedka saxan dhaqameedka, si loo yareeyo khilaafaadka firfircoon ee ugu yar, lana shaqee saliida lagu qasbay si loo yareeyo cilladaha kuleylka oo loo gaaro